ဇန်နဝါရီလ 8, 2014 မှာ 8: 00 ညနေ
ကိုယ့်ကိုကြိုက် app များကိုသော့ခတ်
ဇန်နဝါရီလ 3, 2014 မှာ 8: 56 နံနက်
ဒါက ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2013 မှာ 2: 38 ညနေ
၎င်း၏အလုပ်ကို! အကောင်းဆုံး sftware
ဒီဇင်ဘာလတွင် 24, 2013 မှာ 4: 13 ညနေ
အလွန်အသုံးဝင်သော App ကို ... ..
ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2013 မှာ 10: 50 ညနေ
Apps ကပကောင်းသော setvis louk
ဒီဇင်ဘာလတွင် 7, 2013 မှာ 9: 36 ညနေ
nice app ကို ......... goood
ဒီဇင်ဘာလတွင် 7, 2013 မှာ 6: 39 နံနက်
တစ်ဦး 89 ကိုယ့်ဖုန်းကိုနေရာချထားနှင့်ငါ့ phone.plss ဆရာငါ့ကိုမပြောပြခြေရာခံနေပါတယ် solen.how ခဲ့ ur app.my ဖုန်းကို Micromax Ninja ကို၏မင်္ဂလာပါ sir.i နံနက်အသုံးပြုသူ ... ။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 4, 2013 မှာ 4: 29 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 20, 2013 မှာ 9: 16 ညနေ
ငါ app ကိုသော့ခတ်ဖုံးကွယ်နှင့်ယခုငါပြန်ဖွင့်ဖို့ဆိုလမ်းကိုတွေ့မြင်အတွက်မရှိမဖြစ်ရှိပါတယ် ????
ဒီဇင်ဘာလတွင် 1, 2013 မှာ 10: 39 နံနက်
app ကို uninstall
နိုဝင်ဘာလ 13, 2013 မှာ 11: 29 နံနက်
ငါအစောပိုင်းက app ကိုသော့ခတ်သုံးပြီးခံခဲ့ရပေမယ့်အန်းဒရွိုက် 4.2.2 မှအဆင့်မြှင့်နှင့်နောက်တဖန် app ကိုသော့ခတ်ဒေါင်းလုပ်ပြီးကိုယ့်ကြောင့်မှတ်ပုံတင်ဖို့ငါအီးမေးလ်အကောင့်ထဲမှာယူပြီးမပေးပါ။
ဒါဟာပြသထားတယ်: အီးမေးလ်ပို့ရန် format နဲ့အမှား ..
ကိုကူညီပါ ကျေးဇူးပြု. !!
vivek နှစ်ရှိမစ္စတာပန်ဒေး says:
ဇန်နဝါရီလ 16, 2014 မှာ 12: 52 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 18, 2013 မှာ 6: 38 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 11, 2013 မှာ 9: 07 ညနေ
Storang & ရိုးရှင်းသော။
Pranabesh Singh က says:
အောက်တိုဘာလ 7, 2013 မှာ 10: 07 ညနေ
ငါသည်ငါ့ app ကိုသော့ခတ်နဲ့ဝှက်ထား ...
ငါ app သို့မဟုတ်ငါ dial ခဲ့အရေအတွက်ကိုရဖို့ကို goto ခဲ့သည့်အတွက် link ကိုမေ့ ...
အောက်တိုဘာလ 15, 2013 မှာ 3: 44 ညနေ
ဝှက်ထားသော app ကိုမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည် app ကိုသော့ခတ် software ကိုဖျက်ပစ်
အောက်တိုဘာလ 2, 2013 မှာ 4: 45 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 1, 2013 မှာ 11: 25 နံနက်
စက်တင်ဘာလ 30, 2013 မှာ 7: 35 ညနေ
Sefty သော့ခတ် apslock
စက်တင်ဘာလ 22, 2013 မှာ 12: 39 ညနေ
Basavaraj.M ။ says:
စက်တင်ဘာလ 21, 2013 မှာ 5: 25 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 21, 2013 မှာ 7: 24 နံနက်
တင့်တယ် app ကိုသော့ခတ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2013 မှာ 8: 48 ညနေ
nice app ကိုသော့ခတ်
စက်တင်ဘာလ 21, 2013 မှာ 7: 21 နံနက်
စူပါ app ကိုသော့ခတ်
စက်တင်ဘာလ 18, 2013 မှာ 3: 30 ညနေ
အကောင်းဆုံး app ကို။
စက်တင်ဘာလ 13, 2013 မှာ 11: 58 နံနက်
မင်္ဂလာပါ, ငါ့ဟာ android ဖုန်း app ကိုသော့ခတ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ဎ apps များ '' setting '' သော့ခတ်နဲ့ကျွန်မစကားဝှက်များနှင့်လည်းအရိပ်အမြွက်မေ့လျော့ကြ၏။
ငါ uninstall လုပ်ဖို့လိုခငျြ
မီတာ Umar says:
စက်တင်ဘာလ 22, 2013 မှာ 10: 46 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 19, 2013 မှာ 4: 09 ညနေ
ဎ apps များ '' setting '' သော့ခတ်နဲ့ကျွန်မပုံစံ password ကိုမေ့လျော့ကြ၏။ ဘယ်လို app ကိုသော့ခတ်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကျွန်မကိုကူညီဖို့ပါ။
စက်တင်ဘာလ 12, 2013 မှာ 11: 22 နံနက်
စက်တင်ဘာလ 7, 2013 မှာ 8: 05 နံနက်
apka Koi contect အကူအညီနဲ့ခေါ်ဆိုခစင်တာ bataye ရန်မဇ
ကိုယ့် applock forgetten ပါပြီ
စကားဝှက်ကိုလုံခြုံရေးမေးခွန်းကို pls ပြန်ကြားချက်
စက်တင်ဘာလ 7, 2013 မှာ 8: 00 နံနက်
စက်တင်ဘာလ 7, 2013 မှာ 7: 59 နံနက်
mene apps များဗ iska paasword bhi thik ဒလအရိပ်အမြွက် bhi thik ဒလသို့မဟုတ် ragistration အခကြေးငွေ bhi က de တန်းတူ isme meri Koi အကူအညီနဲ့ nahi kar raha lock ။
စက်တင်ဘာလ 9, 2013 မှာ 12: 51 ညနေ
ဤသည်ကိုယ်တော်နှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် application ကိုဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာဖြစ်ပါသည်: support@domobile.com
သြဂုတ်လ 29, 2013 မှာ 3: 55 ညနေ
nice သော့ခတ် apps များ
သြဂုတ်လ 18, 2013 မှာ 10: 10 ညနေ
pls app ကိုသော့ခတ်
ဇူလိုင်လ 31, 2013 မှာ 1: 31 နံနက်
ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကို HTC အပေါ်သော့ခတ် app ကို download လုပ်ပါလို့မရပါဘူး
ဇူလိုင်လ 19, 2013 မှာ 8: 58 နံနက်
ကိုယ့် applock password ကိုလုံခြုံရေးမေးခွန်းကို pls အစာရှောင်ခြင်းငါ့ကို reply forgetten ပါပြီ
သြဂုတ်လ 12, 2013 မှာ 3: 18 ညနေ
ဟေးဦး dirctly ......... ဒါဟာ ... အားလုံး appss wl get opend uninstall CN
123 ...7နောက်တစ်ခု "